Indlu encinci "Milklady" - I-Airbnb
Indlu encinci "Milklady"
Truške, Koper, Slovenia
Ezi zindlu zijikelezwe buhlaza kunye nezityalo eziqhelekileyo ezikhula ngeenxa zonke. Izindlu ziyilwe ngendlela yoyilo eqhelekileyo ye-Istria. Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kwii-hammocks, i-barbecue, ikhitshi ekwabelwana ngayo kunye nazo zonke ezinye iinkonzo.
Akukho mbane kwizindlu ezincinci ezi-3 kwaye amagumbi okuhlambela ekwabelwana ngawo akwi-30 yeemitha kude.
4.72 · Izimvo eziyi-19
Siyavuya kakhulu ukunika ulwazi kunye neengcebiso kwiindwendwe zethu malunga nendlela yokuchitha usuku. Sikwanazo neemephu zabakhenkethi kunye nolunye ulwazi kwindawo yonke.